Probiotika voajanahary: Sakafo manome bakteria tsara | Nutri Diet
Mila manatsara ny fandevonan-kanina ve ianao? Ny fakana probiotika voajanahary dia afaka manampy anao hahatratra an'io satria voadinika izany mamerina ny fifandanjan'ny bakteria ao amin'ny tsinay.
Jereo hoe inona ny tombony hafa azo avy amin'ireto zavamiaina bitika voalaza etsy sy eroa ireto, ary koa ireo sakafo izay ahafahanao mampiditra azy ireo amin'ny sakafonao.
1 Inona no probiotics?
2 Mitovy amin'ny prebiotics ve izy ireo
2.1 Miasa ve izy ireo?
3 Ahoana ny fomba hahazoana probiotics voajanahary
4 Momba ny famenon probiotika
Inona no probiotics?
Mba hanazavana ny atao hoe probiotika dia fanombohana tsara ny fisian'ny bakteria tsara sy ratsy amin'ny natiora. Probiotics dia ao amin'ny vondrona voalohany. Momba izany zavamiaina bitika mahasoa izay miaina ao anaty vatana ary izy ireo dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny.
Ny probiotika dia mampihena ny isan'ireo bakteria ratsy. Amin'izao fomba izao, manampy amin'ny fitazonana ny haavon'ny bakteria ao amin'ny tsinay amin'ny fifandanjana mahasalama. Ho fanampin'izany, ireo bakteria sy masirasira ireo dia mifandray amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana maro hafa. Ny olona sasany dia mitondra azy ireo any:
Tsaboana ny fivalanana, ny fitohanana ary ny entona. Matetika izy ireo dia ampiasaina miaraka amin'ny antibiotika hiadiana amin'ny voka-dratsiny amin'ny fiasan'ny tsinay.
Fitsaboana soritr'aretin'ny colitis ulcerative na fivontosan'ny tsinay mora tezitra
Hamafiso ny hery fiarovanao
Mampihena ny tsy fandeferan'ny lactose
Sakano ny lavaka
Hatsarao ny fiasan'ny ati-doha
Sakano ny tsy fahazakana
Miaro amin'ny aretina mikraoba
Mampihena ny soritr'aretin'ny eczema na psoriasis
Mampihena ny soritr'aretin'ny aretina miteraka havizanana
Mampiroborobo ny fahasalamana amin'ny ankapobeny
Mitovy amin'ny prebiotics ve izy ireo
Tsia, ary ilaina ny tsy hampifangaro azy ireo amin'ny prebiotics. Tsy toy ny probiotika, ny prebiotics dia tsy mitahiry bakteria velona. Fa kosa, inona no ataon'ireo sakafo prebiotika dia ny manome andiana akora ho an'ny bakteria tsara izay efa ao anaty tsinainao mba hitomboany. Asparagus, oats ary legume dia sakafo prebiotic.
Miasa ve izy ireo?
Betsaka ny olona milaza fa niaina fanatsarana ny fahasalamany (indrindra fa ny aretin-kibo) rehefa avy nanadihady probiotika. Saingy misy mpikaroka marobe ihany koa izay, na dia eo aza ny fanekena ny tombontsoa sasany, dia mino izany fandalinana bebe kokoa no mbola ilaina mifandraika amin'ny tombony rehetra izay ifandraisan'izy ireo. Etsy ankilany, zava-dehibe ny manamarika fa misy karazana probiotika maro. Ny vokany eo amin'ny vatana dia tsy mitovy arakaraka ny karazana probiotic resahina.
Ahoana ny fomba hahazoana probiotics voajanahary
Afaka mahazo probiotika ianao amin'ny alàlan'ny sakafo masirasira. Ny yaourt no loharano malaza amin'ny probiotika voajanahary. Nasaina nanamafy ny taolana izy ireo. Ary ny kinova ambany-matavy sy siramamy ambany dia matetika tafiditra ao anaty drafitra fihenan-danja, indrindra amin'ny sakafo atoandro na tsakitsaky.
Nefa na dia io aza no mora azo indrindra, tsy ny yaourt irery no sakafo probiotika. Misy zavatra tsara hafa loharanon'ny probiotika ho an'ny sakafonao izay mendrika hodinihina:
Kefir: Heverina ho iray amin'ireo loharanom-probiotika tsara indrindra, ny kefir dia zava-pisotro ronono misy masirasira avy amin'ny Kaokazy. Vonona izany amin'ny alàlan'ny fampidirana kefir nodules amin'ny ronono omby na osy. Mandefitra tsara amin'ny ankapobeny ny olona tsy mahazaka lactose, fa raha mila atao tsy misy ronono ianao, dia azo asongadina ny fomba hafa toy ny kefir rano. Azonao atao ny manomana azy ao an-trano na mividy kefir voaomana amin'ny fivarotana lehibe.
laisoa nalona: Laisoa voahandro. Kimchi koreanina dia sakafo probiotika iray hafa voaomana miaraka amin'ity sakafo ity (ankoatry ny legioma hafa).
Miso: Pasta japoney natao tamina voamadinika masirasira isan-karazany. Mifandraika amin'ny tombony lehibe amin'ny fahasalamana dia lasopy miso no tena ampiasaina.
Sakafo sasany: Mozzarella, cheddar, trano bongo, gouda ... Na eo aza ny tombontsoa azo avy aminy dia tokony hohanina antonony foana ny fromazy.
Pickles masirasira: Mba hamoahana vokatra probiotika dia ilaina ny fanaovana azy ireo tsy misy vinaingitra.
tempeh: Zana-boankazo voaforona indoneziana voaangona. Amin'ny tontolo hafa dia nanjary sakafo tena sarobidy noho ny haren'ny proteinina izy io, indrindra ireo olona manaraka sakafo tsy mihinan-dra.
Ny Probiotics dia mety hisy vokany hafa, mazàna kely. Amin'ny tranga sasany dia afaka mamokatra entona malefaka sy kibo izy ireo. Raha toa ka misy vokany eo aminao izany dia manandrama mampihena ny habetsany.
Momba ny famenon probiotika
Misy fomba maro hahazoana probiotics amin'ny alàlan'ny sakafo, fa azo atao ihany koa ny manome probiotics ho an'ny vatana amin'ny alàlan'ny famenon-tsakafo. Amin'ny kapsily, vovoka, na endrika misy ranoka, ny famenon-tsakafo dia mahatonga ny probiotics ho mora kokoa. Na izany aza, tsy mitovy amin'ny sakafo mahavelona probiotika izy ireo.
Farany, toy ny famenon-tsakafo marobe, ny fihinanana azy ireo dia mety tsy ho voaro aminao. Alohan'ny hanombohanao mihinana probiotika na famenon-tsakafo isan-karazany, toro-hevitra ny manatona dokotera, indrindra amin'ny vehivavy bevohoka na mampinono.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Probiotika voajanahary
Aluminium sy fahasalamana